यी हुन् कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने विश्वका खेलाडी तथा फुटबल क्लबहरु | Kendrabindu Nepal Online News
11387287 533621 4408323 6445343
यी हुन् कोरोनाविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने विश्वका खेलाडी तथा फुटबल क्लबहरु
१३ चैत्र २०७६, बिहीबार ०८:१७
विश्व व्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अहिले विश्व आतंकित बनेको छ । विश्वका अधिकांश देशहरु लकडाउन गरिएको छ । कोरोनाकै कारण सम्पूर्ण विश्वका खेलकुदहरु कार्यक्रमहरु पनि ठप्प रहेका छन् । खेलकुद ठप्प रहँदा विश्वभरका खेलाडी पनि क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । साथै यस संकटको घडीमा विश्वका खेलकुद निकाय, खेलाडी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल क्लबहरुले कोरोना विरुद्ध लड्न आ आफ्नो तबरबाट आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । को को छन् त सहयोगी खेलाडी र क्लबहरु :
१. लिओनल मेस्सी
विश्व व्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा स्पेनिस बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनल मेस्सीले एक मिलियन युरो सहयोग गरेका छन् । कोरोना संक्रमणविरुद्व लड्न मेस्सीले बार्सिलोनाको सहर र आफ्नो देश अर्जेन्टिनास्थित रोजारियो सहरका लागि बाँडेर खर्च गर्ने गरी १ मिलियन युरो सहयोग गरेका हुन् । मेस्सीले प्रदान गरको सो रकम बार्सिलोनामा रहेका सार्वजनिक अस्पताल, क्लिनिक र अर्जेन्टिनास्थित उनको गृहनगर रोजारियोमा रहेको हस्पिटलले आधा आधा रकम खर्च गर्नेछन् । बार्सिलोनास्थित एक अस्पतालले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत मेस्सीले गरेको सहयोगलाई पुष्टि गर्दै कोरोनाविरुद्वको अभियानमा सो रकम खर्च हुने जनाएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणबाट युरोपेली मुलुक प्रभावित भएसँगै पोर्चुगल स्टार फुटबलर तथा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पनि कोरोनाविरुद्ध लड्न १ मिलियन युरो सहयोग गरेका छन् । रोनाल्डोले पोर्टो र लिस्बनका एक एक अस्पताललाई उक्त रकम सहयोग गरेका हुन् । रोनाल्डोले कोरोनाका विरामी उपचारका लागि भेन्टीलेटर र बेड निर्माणका साथै अन्य आवश्यक सामग्री खरिदका लागि लिस्बनको सान्टा मारिया अस्पताल र पोर्टोको सान्टो एन्टोनियो अस्पताललाई सहयोग गरेका हुन् ।
३. पेप ग्वार्डिओला
कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न म्यान्चेष्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले १ मिलियन युरो सहयोग गरेका छन् । युरोपेली फुटबलका क्लब हाई प्रोफाईलका स्पेनिस प्रशिक्षकले कोरोनाविरुद्व लड्न स्पेनलाई १ मिलियन युरो सहयोग गरेका हुन् । उक्त सहयोग रकम बार्सिलोनाको मेडिकल कलेज र डेनियल फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित अभियानमा जानेछ । ग्वार्डिओलाको सहयोग रकम अस्पतालमा भर्ना भएकाको उपचारमा संलग्न अस्पतालका कर्मचारीको लागि मेडिकल उपकरण र सुरक्षा सामाग्री खरीदमा खर्च गरिनेछ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विरुद्ध लड्न विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले १० मिलियन डलर आर्थिक सहयोग गरेको छ । फिफाले कोरोनाविरुद्ध लड्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई १० मिलियन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो । फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले कोरोनाबाट प्रभावित फुटबल समुदायका सदस्यहरूलाई सहयोग पु¥याउन विश्व व्यापी फुटबल सहयोग कोष स्थापना गर्ने समेत बताएका छन् ।
५.आर्सनल फुटबल क्लब
इङ्घिलस फुटबल क्लब आर्सनलले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न १ लाख पाउण्ड सहयोग गरेका छन् । द आर्सनल फाउन्डेसनले कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको स्थानीय परोपकारी संस्था र संस्थाहरूलाई उक्त सहयोग दिएको हो । सामाजिक उत्तरदायीत्वको उद्देश्यले उक्त रकम सहयोग गरिएको आर्सनलले जनाएको छ । आर्सनलका मुख्य प्रशिक्षक मिकेल अर्टेटालाई समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । तर, अर्टेटा पूर्णरुपमा ठिक भइसकेका छन् ।
६. रोबर्ट लेवान्डोस्की
वायर्न म्युनिखका फरवार्ड रोबर्ट लेवान्डोस्की र उनकी श्रीमती अन्नाले कोरोना भाइरसविरुद्व लड्न एक मिलियन युरो सहयोग गरेका छन् । कोरोनाविरुद्ध लडाईंमा लेवान्डोस्की दम्पत्तिले आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । यो कठिन परिस्थितीलाई मध्यनजरमा राख्दै लेवान्डोस्कीले भनेका छन् ‘आज हामी सबै टिममा खेलिरहेका छौं । यो लडाईंमा हामी बलियो हुन आवश्यक छ । यदी हामीले कसैलाई सहयोग गर्न सक्यौं भने, यसले काम गर्नेछ । ‘यदी हामी एक साथ खडा भयौं भने एक अर्काप्रति उत्तरदायित्व देखायौं भने यसबाट बाहिर निस्कन सक्छौं ।’ उनले थपेका छन् । त्यस्तै, लेवान्डोस्कीका सहकर्मी लियोन गोरेत्जका र जोशुआ किमिचले समेत महामारीविरुद्ध लड्न ‘वि किक कोरोना’ नामको एक कोष खडा गरेका छन् । र उनीहरु मिलेर कोषमा एक मिलियन युरो राखेका छन् ।
इटालियन सिरी ‘ए’ क्लब रोमाले अस्पतालमा तीन भेन्टिलेटर र आठ शैया बनाउन सहयोग गरेको छ । रोमाले कोरोना प्रभावित राष्ट्र इटालीको एक अस्पतालमा तीन भेन्टिलेटरसहित आठ शैया निर्माणको लागि लगानी गरेको हो । यस्तै रोमाले एक कोषका लागि ४ लाख २४ हजार पाउण्ड डलरसमेत सहयोग गरेको छ । क्लबका खेलाडी, कोचिङ स्टाफले आफ्नो एक दिनको तलबबाट उक्त सहयोग गरेका हुन् । रोमाले यस अघि मास्क, सेनिटाईजर, ग्लोब्स लगायतका सामग्री अस्पताललाई सहयोग गरेका थिए ।
८. लिरो साने
कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा म्यान्चेष्टर सिटीका मिडफिल्डर लिरो सानेले पनि एक मिलियन युरो सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । कोरोना भाइरसले युरोपियन मुलुकहरु प्रभावित भएसँगै जर्मनको एक हस्पिटलमा कोरोना बिरामीहरुको उपचारका लागि सो रकम सहयोग गरेका हुन् । लिरो हाल जर्मनस्थित आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा छन् ।
(एजेन्सीहरुको सहयोगमा सृजना राईको रिपोर्ट)
कोरोनाविरुद्ध, फुटबल क्लबहरु, लड्न सहयोग गर्ने, विश्वका खेलाडी
Prevकांग्रेसले दियो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई डेढ लाख सहयोग
लकडाउनको आज तेस्रो दिन, सडकहरु सुनसानNext
राष्ट्रपतिलाई आग्रह : 'ओलीका गलत कदमविरुद्ध साथ नदिनु, महाअभियोग हल्ला निराधार'
लगानी बोर्डको सिइओ बन्न दौडधुप, को आकांक्षी कुन नेता निकट ?